Ganacsigii Somalida Islii ee Magaalada Nairobi oo xiran – STAR FM SOMALIA
Ganacsigii Somalida Islii ee Magaalada Nairobi oo xiran
Xirnaashaha Suuqa Ganacsiga xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay iskhilaafeen Ganacsatada yar yar iyo kuwa waa weyn halkaasi ku ganacsada.
Guddiga Ganacsatada Xaafada Islii ayaa sheegay in uu xiran yahay Suuqa inta laga xalinaayo Khilaafka jira iyo cabashada ay mujinayaan Ganacsatada yar yar ee Suuqa xaafadda Islii ku ganacsata, kuwaasi oo ka cabanaya ganacsatada waaweyn.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in masuuliyiin sare ay ku lug leeyihiin khilaafka u dhaxeeya labadaasi dhinac iyo xalka aan weli laga gaarin khilaafkooda, waxayna sheegeen in suuqa uu xirnaanayo ilaa khilaafka laga xalinaayo.
Arintaan ayaa la filayaa inay soo fara galiyaan Maamulka xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi sixal buuxa looga gaaro dhibaatada ka taagan isku dhaca ganacsatada Somalida Islii.
Ganacsatada waaweyn ayaa doonaya macaashka ganacsiga kaligood inay helaan, halka kuwa yar yarna ay doonayaan inay sameystaan ganacsi yar yar oo qiimo jaban ah, taasi oo keentay xurgufta ganacsatada ka dhex bilaabatay.
Somali badan ayaa ku ganacsata Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafada Somalida ay degto Islii, inkastoo caqabada hadda taagan ay tahay mid ay isku hayaan Somalida dhexdooda oo aanan waxba isku ogoleyn.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo magacaabay xilkii u horeeyay ee xafiiskiisa